नबिकेको अदुवाबाटै पनि घरजग्गा किन्न सकिने रहेछ ! तर कसरी ? पढ्नुहोस् – Arthatantra.com
नबिकेको अदुवाबाटै पनि घरजग्गा किन्न सकिने रहेछ ! तर कसरी ? पढ्नुहोस्
इलाम । भनेजस्तो मूल्य नपाएर अधिकांश किसानको अदुवा बारीमै कुहिँदै गएको बेला अदुवा प्रशोधन गरेर यहाँकी एक महिलाले लाखौँ आम्दानी लिइरहेकी छिन् । इलाम नगरपालिका–७ की उषा निरौलाले अदुवाको विभिन्न परिकार बनाई बिक्री गरी लाखौँ आम्दानी गरेकी हुन् । उनले अदुवा प्रशोधनबाटै आफ्नो परिवार मात्रै पालुकी छैन नगरपालिकाभित्रै जग्गा किनेर सामान्य घर जोडेकी छिन् भने छोरीलाई काठमाडौँ राखेर पढाइरहेकी छिन् ।
विसं २०६८ देखि सामान्य तालीम लिएर अदुवा प्रशोधन थालेकी निरौलाले अदुवाबाट क्यान्डी, तितौरा, मिक्चर, सर्बत, सुठो र अचार बनाउने गर्छिन् । अदुवाबाट विभिन्न परिकार बनाएर जीवन चलाउँदै प्रशोधन केन्द्रमै मात्रै मासिक पाँच क्विन्टल खपत हुने गरेको उनले बताईन् ।
“प्रशोधन केन्द्रमा पाँच क्विन्टल अदुवा खपत हुन्छ । यो सबै अदुवा अग्र्यानिक मात्रै ल्याउने गरेकी छु” उनले भनिन् । निरौलाले वार्षिक रु ४५ लाख बराबरको अदुवाको परिवार बिक्री गरी रु १८ लाख नाफा कमाएकी छिन् ।
“व्यावसायिक रूपले खेती गर्ने ठूला किसानले रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्छन्” उनी भन्छिन् “त्यही भएर साना किसानबाट मात्रै अदुवा किन्छु ।” विभिन्न समस्याले गर्दा शुरुवाती समयमा अनावश्यक झण्झट खेपेकी निरौलाले व्यवसाय बढेसँगै आम्दानी मात्र नभई प्रशंसा पनि बटुलेकी छिन् ।
“जति बेला मैलै यो उद्यम शुरु गरे । त्यति बेला त छिमेकीबाट पनि सहयोग पाइन् । राम्रो बजारीकरण पनि नभएको बेला भएकाले अन्य मानिसलाई पनि यसका बारेमा बुझाउन समस्या प¥यो ।” उनी थप्छिन् । “अहिले पनि बजार मूल्य त राम्रो पाएको छैन । तर बनाइसकेका परिकार खेर चाहिँ फाल्नु पर्दैन ।”
यस्ता वस्तुको माग स्वदेशमा भन्दा पनि विदेशमा ‘हारालुस’ हुने गरेको उनी बताउँछिन् । “यहाँ त अहिले पनि अदुवाको सर्बतभन्दा मानिसले बुझ्दैनन् । तर बाह्रय पर्यटकका लागि भने यही सर्वत राम्रो छ ।” यस्ता परिकार इलाम बजार र फिक्कलबाटै बाह्य पर्यटकले खरिद गर्ने गरेका छन् ।
अकबरे, अमलाबाट पनि परिकार बनाउने गरेकी निरौलाको मुख्य उद्यम भने अदुवाकै परिकार हुने गरेका छन् । बजारीकरणमा समस्या हुने गरेको उनी बताउँछिन् । जिल्लामा वार्षिक ४५ हजार मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भइरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।रासस
१८ लाख ३४ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बजारमा, कसरी खरिद गर्ने ? काठमाडौ । सेयर बजारमा बैक र फाईनान्सको १८ करोड ४३ लाख बराबरको हकप्रद सेयर थपिएको छ । […]
सरकारको पाँच अर्बको विकास ऋणपत्र, बोलकबोलको समय कहिलेसम्म ? काठमाडौ । तरलता अभाव खेपेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब रुपैया दिने भएको छ । जसका […]